Bakha ithuluzi elisha lokwazi izimpawu zokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukwazi izimpawu zokushintsha kwesimo sezulu kubalulekile ukudala amamodeli okubikezela nokwenza izinqubomgomo zokuvimbela izinhlekelele ezingazibanga. Ngakho-ke, uphenyo olwenziwe ngumnyango we Ithiyori ye-URJC Signal and Communications (ISpain) isungule i-algorithm yokuhlangana (ukuqoqwa kwama-node) abizwa nge-SODCC (Second-Order Data-Coupled Clustering) esiza ukuhlaziya imininingwane yesimo sezulu ukusesha izimpawu ezintsha nobufakazi bokuguquka kwesimo sezulu.
Ngalolu lwazi kuhloswe ngalo hlela futhi uthuthukise amapulazi omoya, okwandisa ukusebenza kokukhiqizwa kwamandla nokugwema, nakho, inani elikhulu lokukhishwa kwegesi yokushisa okufaka isandla ekuguqulweni kwesimo sezulu.
1 Ithuluzi elisha
2 Thuthukisa amapulazi omoya
Ithuluzi elenzelwe ukusetshenziswa kumanethiwekhi amakhulu wezinzwa. Imininingwane eqoshwe eziteshini zesimo sezulu emhlabeni wonke ingaxhunyaniswa komunye nomunye futhi ishintshanise okuguquguqukayo nemingcele erekhodwe ngezenzeko ezenzeke phakathi kwamashumi eminyaka ezifakiwe.
Ngenxa yedatha eqoqwe yilezi zingqalasizinda emashumini eminyaka, iqembu locwaningo likwazile ukwenza ukuhlaziywa kwedatha yokushisa yeNhlonhlo yase-Iberia kusukela ngo-1940. Phakathi kwedatha erekhodiwe futhi yahlaziywa, kutholakele ushintsho emaphethini esikhala sokushisa kwezemvelo ezindaweni, okukhomba uphawu olungaba khona lokuguquka kwesimo sezulu.
Thuthukisa amapulazi omoya
Lapho imininingwane isitholakele futhi yahlaziywa, iqhathaniswa ukuze yazi ubudlelwano lezi zinguquko emaphethini okushisa abanazo nokukhiqizwa kwamandla omoya. Uma ukwazi ukubikezela ukuthi imimoya izokwenziwa ngokunembe kakhudlwana futhi izoshaya kuphi kakhulu, singakwazi ukwenza lula futhi sandise ukusebenza kokuhlelwa kwepulazi lomoya.
Lolu cwaningo luyakhiwa ingxenye yephrojekthi ye-OMEGA-CM, exhaswe nguMnyango Wezemfundo woMphakathi waseMadrid. Iqembu locwaningo, eliholwa ngoDokotela u-Antonio Caamaño noSancho Salcedo-Sanz, lakhiwe ngabacwaningi abavela emanyuvesi amathathu: iRey Juan Carlos University, i-Alcalá University neMadrid Polytechnic University.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Bakha ithuluzi elisha lokwazi izimpawu zokuguquka kwesimo sezulu